Shiinaha KN95 GB2626-2006, GB2626-2019 (oo leh Exhalation Valve) warshad iyo soosaarayaasha | Gubang
1. Ku fur maaskaro / qalabka neefsashada labada gacmood.
2. Ku xir koob maaskaro sanka iyo afka sanka dushiisa ee buundada sanka.
3. Dheg dheg u dhig dheg kasta.
4. Dhig faraha faraha labada gacmood dusha sare ee sanka. Far labada dhinac dhinac u riix
sanka sanka si loogu shubo aagga sanka qaabka dadka isticmaala sanka. Dheellitir wareegga dhegta haddii loo baahdo
hubi in maaskarada si ammaan ah loo xiray.
5. Hubinta shaabadda
Labada gacmoodba dul saar maaskaro, neefna u qaad si deg deg ah si aad u hubiso in maaskarada ay si adag wejiga ugu xirmeyso.
Labada gacmoodba dul saar maaskaro oo neef ka soo bax. Haddii aad dareentid daadasho, ma jiro shaabad sax ah.
Haddii hawo ku soo daato hareeraha sanka, dib u hagaaji sanka sanka sida lagu sharaxay. Haddii hawadu ka soo daadato cidhifyada maaskaro, dib u hagaaji wareegga dhegta ee hareeraha dhegaha illaa inta laga helayo shaabad sax ah.
· Haddii shaabad sax ah aan lagu gaari karin daadashada hawada awgeed, weydiiso caawimaad ama iskuday cabir ama qaab kale.
6. Beddel maaskaro haddii aan la gaari karin shaabad wejiga ku habboon.
7. Maskaxda isla markiiba ku beddel haddii neefsashadu adkaato ama maaskarada ay waxyeello yeelato ama qalloocato
Midkoodna boggan, dukumiintiyada la bixiyay ama qoraal kale oo lagu sameeyay halkan ha lagu muujiyo muuqaal ahaan, ha la daabaco ama hadal ha ahaado ama ha loo diro DrugTestsInBulk.Com ma aha in loo fahmo inuu yahay dammaanad ganacsi ama in wajiyada ama galoofyada wejiga ama galoofyada aan iibinno ama adiga doorteen, waa mid ku habboon ujeeddo gaar ah. DrugTestsInBulk.Com wax mas'uuliyad ah kama saareyso ku-habboonaanta ama ku-habboonaanta xulashada isticmaalaha dhammaadka wejiga ama galoofyada codsi gaar ah. Sababta oo ah nadaafadda iyo la iska tuuri karo ee waji-shareerka iyo galoofyada, dhammaan iibku waa kama dambeys mana lahan wax soo celin ama soo celin ah.
Maaskarada wajiga ee loo yaqaan 'KN95' waxay wajiga ka ilaalisaa siigada, manka, dander xayawaanka, iyo inbadan. Lama Dhaqi karo. Wuxuu ku yimaadaa xirmo 10 ama 20. Maaskarada wajiga ee loo yaqaan 'KN95' waxay leedahay dareen fiican oo wey fiican tahay oo wejiga ayey ku dhagan tahay. Lagu sameeyay Shiinaha.
Hore: KN95 GB2626-2006, GB2626-2019 (Madaxa-Fuulay)
Xiga: KN95 GB2626-2006, GB2626-2019
Neefiyaha Shiinaha Kn95
Neefsade Kn95 Qeybiyaha
Qalabka Neefsashada Kn95
Jawaab bixiyaasha Kn95
Jawaabayaasha Kn95 Alaab-qeybiyeyaal
KS-9008 Heerka CE FFP2 NR (Qiiqa ...